होलेरी आक्रमणको कथा – Rajmarg Online
होलेरी आक्रमणको कथा
जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यो दश वर्षे युद्ध, कमाण्डर वर्षमान पुनको आँखामा २५ वर्ष अघिको त्यो युद्ध तस्वीर
रोल्पा, फागुन २। पच्चिस वर्ष अघि, २०५२ साल फागुन १ गते । रोल्पाको होलेरी भन्दा माथि गढीलेखमा हिउँ परिरहेको थियो । करिव माईनसमा थियो तापक्रम । गढिलेख माथिको आकाशमा बादल मडारिएको थियो ।
त्यहि समय, तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) को ३६ जनाको लडाकु फौज गढिलेख आईपुग्यो । बेलुकाको झिससिमे हुँदै गर्दा त्यो लडाकु फौज होलेरी झ¥यो । होलेरीमा रहेको प्रहरी चौकी माथि धावा बोल्यो । १२ जनाको दरबन्दी रहेको त्यो चौकीमा ८ जना थिए । उनीहरुलाई फौजले नियन्त्रणमा लियो, हतियार कब्जा ग¥यो । त्यो आक्रमण जनयुद्धको पहिलो आक्रमण बन्न पुग्यो । त्यो आक्रमणको कमाण्डर थिए, अहिलेका उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुन अनन्त ।
रोल्पाको होलेरी स्थित रुन्टीगढी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको ‘होलेरी मिडिया सम्मेलन’मा मन्त्री पुनले होलेरी आक्रमणको कथा सुनाए । आक्रमणका कमाण्डर वर्षमान पुनसँग पत्रकार टीकाराम यात्रीले ‘होलेरी आक्रमणको इतिहास’को सत्रमा चर्चा गरे । पहिलो आक्रमणका कमाण्डर पुन २४ वर्षका थिए ।
त्यो आक्रमणमा अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन पासाङ सहकमाण्डर थिए । पुर्वसभामुख ओनसरी घर्ति, प्रदेश नं. पाँचका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनाम पनि सहभागी थिए । मानवीय क्षति नभएको त्यो पहिलो आक्रमणबाट माओबादीको फौजले हतियार कब्जा गरेको थियो ।
‘मान्छे मार्ने पार्टीको निर्देशन थिएन, युद्धको उद्घोष मात्र गर्ने, कसैको ज्यान नलिने भन्ने नै थियो ।’ मन्त्री पुनले पहिलो युद्ध बारे बताए, ‘आक्रमण पछि होलेरी बजारमा नारा लगायौँ, हामी कुनै चोर हैन, माओबादी हौँ, हामीले युद्ध सुरु ग¥यौँ, भनेर भनेपछि बजारका मानिसहरु पनि चुप लागे ।’
तत्कालिन नेकपा माओबादीले रुकुमको आठविसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा समेत त्यहि दिन आक्रमण गरेर औपचारिक रुपमा युद्धको सुरुवात गरिएको थियो ।
होलेरीको त्यो प्रहरी चौकीमा माओबादीले ७ वर्षपछि फेरी आक्रमण ग¥यो । दाङको भालुबाङ स्थित ससस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पको तालिम केन्द्रमा आक्रमण गर्ने योजना थियो । ‘१४÷१५ सयको लडाकु फौज रोल्पाको मसिनाबाट दाङ हुँदै भालुबाङमा हान्ने योजनाको सुचना चुहिए पछि माओबादीले पुनः होलेरीमा आक्रमण गरेको हो ।’ मन्त्री पुनले सुनाए ।
२०५८ साल असार २८ गतेको विहान ४ बजे भएको त्यो आक्रमणबाट ७५ जना प्रहरीहरु विद्रोहीको कब्जामा परे । प्रहरी हवल्दार राजबहादुर गिरीले ज्यान गुमाएका थिए भने बन्दोबस्तीका सामान र हतियार माओबादीले कब्जा गरेको थियो ।
‘देशको राजनीतिक अवस्था तरल अवस्थामा थियो, भरे भोली नै हुन्छ भन्ने थाहै थिएन ।’ पुनले युद्ध सम्झदै भने, ‘त्यो आक्रमणले फेरी नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याईदियो ।’ युद्ध चरम अवस्थामा पुगेको त्यो समयमा दिनभर प्रहरी चौकीमा बस्ने र रातपरेपछि बाहिर गाउँमा जाने गर्दथ्यो ।
विहान अध्यारो मै चौकीलाई चारै दिशाबाट घेरा बन्दी गरेको लडाकुको फौजले विहानै गीत गाउँदै चौकीमा प्रवेश गरेका लडाकुहरुलाई आक्रमण ग¥यो । ७८ जना मध्य ७५ जना कब्जामा परेको प्रहरीहरुलाई लिएर माओबादीले नवागाउँ तिर लागे ।
दोस्रो पटक भएको आक्रमणपछि तत्कालिन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले राजासमक्ष सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव लगेर गएका थिए । त्यो प्रस्ताव अस्विकृत भएपछि प्रधानमन्त्री कोईरालाले राजीनामा दिएका थिए ।
होलेरीको त्यो प्रहरी चौकी अहिले छैन । दुई पटक आक्रमणले ध्वस्त भएको चौकीको भग्नावशेष मासेर स्मारक निर्माण गरेको छ । त्यो स्मारकको त्यहि पहिलो आक्रमणको कमाण्डर तथा अहिलेका उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले उद्घाटन गरेका छन् ।
शान्त स्वभावका मानिने मन्त्री पुन युद्धको कमाण्डर कसरी बने ? पत्रकार यात्रीले गरेको प्रश्न सबैको प्रश्न थियो । लामो समय विद्यार्थी आन्दोलन पछि ४६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको फार्म भरेर २०४७ मा सदस्य भएका वर्षमान जिल्लाको ‘सिनिएर’ नेता थिए । ‘इतिहास महत्वपुर्ण हो, व्यक्ति त संयोग मात्र हो, रोल्पाका करिव ५ हजार माओबादीलाई मुद्धा थियो, पछि मलाई पनि एक दर्जन मुद्धा लाग्यो ।’ विगत सम्झदै मन्त्री पुनले भने, ‘२४÷२४ दिन जेल परेपछि हामी भुमीगत राजनीति सुरु ग¥यौँ ।’
मृत्युबोध हुने तमाम घटनाहरु किस्सा जस्तो सुनाउँदै मन्त्रीले आफैले युद्धमा कोही कसैको ज्यान लिनुपर्ने अवस्था भने नआएको बताए । ‘म कमाण्डर थिएँ, त्यसैले कमाण्ड नै गरेँ, अझ व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर अहिलेसम्म कसैसँग झगडा र लडाई गरेको छैन ।’
मन्त्री पुनले होलेरी आफैमा युद्ध र शान्तिको अद्भुत विम्वको रुपमा विकास भएको बताए । ‘विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी सुरु भएको युद्ध र विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्ष सम्झौता हुँदै शान्ति निर्माण गरेर सविधान निर्माण गर्ने सानो कुरा हैन ।’ मन्त्री पुनले भने, ‘होलेरीको प्राकृतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक महत्वको विषयमा अगाडी भएपनि अब आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुनेछ ।’